Nahoana No Heverin’ny Mpianatra Ho Tsy Mahavita Mitsabo Ny ‘Fanabeazana Miendrika Apartheid’ Ao Shily Ireo Fanovàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2015 18:34 GMT
Mpianatra manao hetsi-panoherana ao Shily (Ben Achtenberg)
Fiarahana mamoaka lahatsoratra eo amin'ny NACLA sy ny The Indypendent ity lahatsoratr'i Emily Achtenberg ity. Nivoaka voalohany tamin'ny 3 Martsa 2015, ary naverina navoaka eto noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Voararan'ny lalàna iray vaovao ao Shily ny fakàna tombony, sarampianarana, ary fifantenana eo am-pidirana any amin'ìreo sekoly tsy miankina sy ambaratonga faharoa izay mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana—nefa milaza ireo mpianatra fa mbola betsaka noho izany no tokony hatao mba handravàna ity fanabeazana faran'izay manome lanja ny endrika ivelany eto amin'izao tontolo izao ity.
Tamin'ny volana lasa iny ny filoha Shiliana, Michelle Bachelet, dia nanasonia lalàna izay manana ny toerany tokoa eo amin'ny fanavaozana ny fanabeazana nisy tao amin'ny firenena tato anatin'ny 30 taona. Lany rehefa nifampitolomana nandritry ny valo volana, ilay lalàna vaovao dia handràra tsikelikely ny fakàna tombony, saram-pianarana, ary ireo fomba fanao amin'ny fifantenana eo am-pidirana an'ireo sekoly fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa tantanan'ny tsy miankina, ary mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakàna.
Ilay fanavaozana izay efa ela no niandrasana azy—nialohavan'ny fiakaran'ny hetra alohan'ny mpandraharaha izay hiakatra ho 8 lavitrisa dolara isantaona ho an'ny fanabeazana sy ireo fandaharanasa sosialy hafa—dia miresaka ireo fampanantenana fototra nataon'i Bachelet sy ny vovonana vaovao itambaran'ny afovoany ary ny elatra ankavia misy azy nadritry ny fampielezankevitra tamin'ìny 2013. Noarahabain'ny maro tokoa ho dingana iray goavana mankany amin'ny famotehana ny rafi-panabeazana mifototra amin'ny fitadiavana tsena sy manavakavaka ara-bola sy sosialy, lova navelan'ny fitondrana jadon'i Pinochet (1973–1990). Araka ny ambaran'ilay ONG Shiliana Educación 2020, mpiantsehatra fototra tamin'ny fandrafetana ilay fanovàna, “Manova ny rafi-panabeazaa Shiliana ity lalàna ity, rafitra izay faran'ny tena manavakavaka sy mpijery ivelany indrindra eto an-tany, hiala amin'ny endrika zavatra natao hojifaina ka ho lasa zo sosialy.”
Araka ny efa novinaina dia nisedra fanoherana matanjaka avy amin'ireo sehatra mpifikitra amin'ny nentin-drazana ilay tolona fanaovana lalàna naharitra elabe mahakasika ilay fanavaozana ny rafi-panabeazana natolotry ny Maro an'isa vaovao. Saingy nisy koa ny fandàvana niainga avy any amin'ireo tsy noeritreretina mihitsy: ilay hetsika tena tsara rindran'ireo Shiliana mpianatra. “Tsy ny fanavaozana no nampihetsika anay,” hoy ny Federasionan'ny Mpianatra avy amin'ny Anjerimanontolon'i Shily (FECH), izay nitarika ilay hetsi-panoherana goavana be tamin'ny 2011-13 ary nitondra ho amin'ny fitakian'ny vahoaka ny hanavaozana ny rafi-panabeazana sy nisava ny làlana ho an'ny fandresen'ny Maro an'isa vaovao tamin'ny fifidianana. “Vanim-potoana manan-tantara iray no nodinganintsika teo amin'ny resaka fanavaozana ny fanabeazana, ary koa tena nanimba be ny demaokrasiantsika,” hoy i Gabriel Boric, iray amin'ireo mpianatra mpitarika efatra voafidy ho ao amin'ny Kaongresy tamin'ny 2013 (izay, na izany aza, tsy nifidy nampandany an'ilay fanavaozana).
Mba hahafantarana tsara ireny fomba fijery feno fanoherana mahaliana ireny, dia tsy maintsy jerena ao anaty vanim-potoana midadasika be ara-tantara ireo fanavaozana vaovao ny fanabeazana. Ny fiovam-penitra manontolon'ny rafitra ao Shily ho an'ny rehetra, malalaka, fanabeazam-panjakana ho any amin'ny tsy miankina, tsy vaoara-maso, baikoin'ny tinady fotsiny, izay nanomboka tamin'i Pinochet, dia nohamafisin'ireo fitondrana demoakratika taty aoriana. Any amin'ny sehatry ny fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa, ny sekolim-panjakana dia nokikisan'ny tetikady napariahana mankany amin'ny boroborintany izay miteraka fivakivakisan'ny famatsiambola eo amin'ireo andrim-panjakana samihafa, ary ny famoronana sekoly tsy miankina hifaninana amin'ireo sekolim-bahoaka tohanan'ny fanjakana.
Ny lalàna koa, hoy ny fanamarihan'ireo mpianatra, dia manome alàlana ireo endrika vaovao fakàna tombombarotra, amin'ny alàlan'ny fampindramam-bola iantohan'ny fanjakàna mba handoavana ny fivarotana ireo sekoly maka tombony ho lasan'ireo mpandraharaha tsy mitady tombony, ary amin'ny sandany misy fanohanana ara-bola eo amin'ny sehatry ny tsena. (noho ny tsindry avy amin'ny Fiangonana Katolika izay tompon'ny betsaka amin'ireny sekoly ireny dia nilaozana ilay tolokevitra iray tany aloha tany nanome alàlana ny fanjakana hividy ireny fotodrafitrasa ireny). Ny andininy ao dia mamaly, amin'ny ampahany, ny fampielezankevitra iray mahatahotra nakarin'ilay tolodalàna iray avy amin'ireo mpanohitra sy mpifikitra amin'ny nentin-drazana, izay nanentana ny ray aman-dreny hiaina teo ambany aloky ny fikatonana faoben'ireo sekoly tsy miankina ho setrin'ilay fandraràna ny fakàna tombombarotra. (dokambarotra iray tao anaty gazety navoaka tamin'ny Desamba no nivaky tamin'ny ampahany hoe : “Sekoly tsy miankina mandray tohana ara-bola, amidy: 2.000 mpianatra, fotodrafitrasa tsy misy kianina, ray aman-dreny mendrika, mpampianatra mendrika…”)
Nokianin'ny mpianatra ihany koa ny fandaharanasan'i Bachelet ho tsy nahavita nanamboatra ny rafi-panabeazana tsizarizarin'ireo sekoly monisipaly an'ny fanjakana, nanatsara ny fanofànana ireo mpampianatra, ny karama, ary ny kalitaon'ny fanarahamaso ny sekoly, na niatrika ny fangatahana fototra nataon'izay ireny, fanabeazana ambony ho an'ny rehetra. Nampanantena fanampin-dalàna ho amin'ity taona ity i Bachelet hiatrehana ireny olana ireny, ahitàna ny fanabeazana maimaimpoana eny amin'ny anjerimanontolo amin'ny 2020, na dia tsy mbola misy antsipirihany tena fantatra mazava aza.
Raha jerena ifotony kokoa, lazain'ny FECH sy Gabriel Boric fa ireo fanavaozana nolaniana sy novinavinaina hatramin'izao dia tsy manapaka ny fitohizana lojikan'ny rafi-panabeazana liberaly amin'ny endriny vaovao, ary mety ho ampiasaina hanamafy azy aza. Amin'ny fampidirana ny rafitra fividianana tapakila, hoy zareo manamafy, hanohy ny fifaninanana any amin'ireo sekolim-panjakana sy ny tsy miankina ireo fanavaozàna ireo, eo amin'ny fampidirana mpianatra sy ny fitaovana enti-miasa, izay nanimba ny kalitaon'ny fanabeazana any amin'ny sekolim-panjakana. Eo indrindra, nataon'i Bachelet entam-barotra ny fanavaozana ny fanabeazana amin'izao fotoana ireo, amin'ny ampahany, ho toy ny tetikasa entina hanatsaràna “ny fisafidianana sekoly” amin'ny fanesorana ireo sakana ateraky ny sarany sy ny sivana—na dia tsy afaka manana safidy hafa azony hiatrehana fifaninanana aza ireo any amin'ny sehatry ny fanjakana, ao anatin'ny teo-draharaha misy ankehitriny.
Ny ilaina, araka ny lazain'ny FECH, dia fakàna ho fananam-pirenena tanteraka sy famerenana ny fanabeazana ho an'ny sehatra tantanan'ny fanjakana, miaraka amin'ny fanohanana ara-bola miainga amin'ny filàn'ilay toeram-pianarana fa tsy ny fangatahany. Tena mifanipaka be amin'ny fijerin'i Bachelet sy ny Educación 2020 io, izay mieritreritra ny vokatra farany amin'ilay fanavaozana ao Shily ho fifangaroana rafitra tsy ikatsahana tombony iraisan'ny fanjakana-tsy miankina, sahala amin'ny ao Pays-Bas na Belzika, izay mijanona ho baikoan'ny tinady.
Naka fomba fijery somary mandinika ny zava-misy kokoa i Camila Vallejo, mpitarika hetsiky ny mpianatra fahiny fa efa lasa solombavambahoaka ankehitriny, manohana ilay fandaharanasa mandeha tsikelikelin'i Bachelet ho ny fomba mora tanterahana indrindra hanafoanana ny fanabeazana mikatsaka tombom-barotra nefa tsy andaniana volabe avy amin'ny fanjakana. Vallejo, izay hitarika ny kaomisônan'ny fanabeazana ao anatin'ny Antenimieran'ny Solombavambahoaka amin'ity taona ity, dia hitàna toerana lehibe amin'ny fandrafetana ny fanadaharanasa manaraka ho an'ny Maro an'isa Vaovao.
Ny fifanandrinana amin'ny resaka lalàna ho avy eo momba ny fampianarana ambony dia ampoizina hiteraka resabe raha oharina amin'ny fifanandrinana tamin'ny taona lasa. Hisy dindo mavesatry ny fahaizana mandrindran'ny hetsik'ireo mpianatra ny ho vokany eo ary hampifandrohy ny fitakian'ny vahoaka hisian'ny fandalinana ara-drafitra midadasika kokoa, amin'ny fampiasàna tetikady mivoatra (avy any amin'ny fakàna ny fifehezana ny sekoly, tonga any amin'ny resaka “kiss-ins” – fifanirohana) izay nahahetsika olona an-jatony tamin'ny lasa.
Amin'izao fotoana izao dia sampanan-dàlana iray no fahitàna ny hetsiky ny mpianatra. Raha fihetsketsehana goavana no nipoitra tamin'ny taona las fony nambara ny fanavaozana natolotr'i Bachelet, dia tsy namparisika sehatra maro ny fandaniana ilay tolodalàna ary niteraka fanamby hanaovana fandaminana vaovao.
Mahafaoka fironana politika maro ilay hetsika, ary mitohy hatrany mitolona mba hamaritra ny fifandraisana misangaojy eo aminy sy ny mpifidiny. Nampisaraka ireo mpitarika ny mpianatra ho lasa andiany amin'ny elatra havanana (FECH) sy elatra havia (Fiangonana Katôlika) ireo fifidianana natao farany teo, miaraka min'ito farany izay manohitra ny fakàna ho fananam-panjakana ireo anjerimanontolo rehetra. Etsy andaniny ny FECH, ny fikambanana mpianatra lehibe indrindra, dia nahavita nampitambatra ireo fari-pifidianana politika telo nananany, ary tsara toerana hitarika ny tolona 2015 ho avy eo (antsoin'ny FECH hoe “Taonan'ny Fampianarana Ambony”).
Raha mety hametraka ahiahy ireo Shiliana mpianatra ka hilaza ny fanavaozana entin'i Bachelet ho ampaham-pahombiazana, ny zava-bitan-dry zareo dia mampianatra izao tontolo izao ny fomba ahafahan'ny hetsi-bahoaka hanova ny politikam-panjakana—na dia tsy ho azo ao anatin'ny fotoana iray aza ny zavatra rehetra—ary ny fahasarotana amin'ny tena handravàna tanteraka io lasitra fanabeazana liberaly amin'ny endriny vaovao tsara aro io.
Mpahay momba ny rafi-panorenana an-tanàn-dehibe i Emily Achtenberg ary mpanoratra ao amin'ny bilaogin'ny NACLA Rebel Currents, mandrakotra ny hetsika sosialy mitranga any Amerika Latina sy ireo governemanta liam-pivoarana.